KRISMASY SY FARAN’NY TAONA :: Mbola tsy rototra amin’ny fanomanana fety ny mponina • AoRaha
KRISMASY SY FARAN’NY TAONA Mbola tsy rototra amin’ny fanomanana fety ny mponina
Efa miantomboka ny volana desambra. Fotoana hitsenana ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona ary ny taona vaovao izao. Eny an-tsena, efa mitobaka ireo haingon-trano isan-karazany mifanaraka amin’ny volon’andro fetin’ny Krismasy.
Tsy mbola mahasarika ny mpanjifa kosa ny fividianana ireny ravaka samihafa ireny. Toy izay ihany koa, tsy mbola mahaliana ny olona ny mividy ireo akoho amam-borona. Mirona kokoa amin’ny fividianana ireo kilalao ho an’ny ankizy ireo ray aman-dreny, raha ny fanazavan’ny mpivarotra eny an-tsena. Maro be sahady mantsy izy ireo no tonga eny amin’ny tranom-barotra samihafa hisafidy kilalao ho an’ny ankizy. “Fitsinjovana ny mety ho fiakaran’ny vidiny no anton’izany”, hoy izy ireo. Misy mihitsy aza ireo ray aman-dreny no efa nanangom-bola hividianana izany ho an’ireo zanany.
Ho an’ny tranombarotra iray etsy Analakely, efa maro ireo tonga nanjifa ny kilalaon’ankizy, toy ny bisikileta. “Manodidina ny folo ireo mpanjifa nividy bisikileta ho an’ireo zanany ny sabotsy lasa teo. Manodidina ny 120 000 ariary hatramin’ny 150 000 ariary ny vidin’izany. Mety hahatratra ny 200 000 ariary kosa izany amin’ny tapaky ny volana desambra satria hanatombo 20 000 ariary isaky ny bisikileta”, hoy ny fanazavan’ny mpivarotra iray ao amin’ny tranombarotra mivarotra kilalao, etsy Analakely. Na izany aza, mbola mandingana herinandro maromaro vao ho tonga ny fety, ka samy afaka hanomana izany avokoa ny tsirairay.
FAHASALAMANA :: An’arivony ireo vehivavy voatsabo amin’ny aretina mamany lava
FOTOANAN’NY FAHAVARATRA :: Manahy ny mety ho fiakaran’ny rano sahady ireo eny amin’ny faritra iva